2021 PVC Robber Label Fanamboarana milina i Ruffic Automatic Magine | Ny mpamatsy milina Jeldo Weldo Weldo
atsofohy ao anaty masinina ny ati-doha sy ny maso
Masinina vita amin'ny fanamboarana
Milina marika Soft PVC Soft Pvc
Milina dispensing milina PVC PVC
Masinina Sinal Crystal Cryal Crystal
Fomba famokarana mandeha ho azy
Milina ara-pahitana momba ny fahitana
Milina famantarana silicon
Label PVC manao milina fanohanana
Lafaoro mandeha ho azy
Fa maninona no misafidy ny Weldo?
Vahaolana sy tranga
Masinina milina diamondra diamondra an-tsaina
Ny famokarana patotra malefaka
Fitaovana kiraro kiraro kiraro
TPR fonon-tanana vita amin'ny famokarana patch
Fitaovana fampiroboroboana fingotra Souvenir
Milina fanamboarana keychain
Fanaovana baomba vita amin'ny fanodinana
Milina vita amin'ny coaster
Masinina enamel masira inamel
Maimaim-poana milina an-tsaina Enamel
Logos kiraro hoso-doko hoso-doko an-tsary
Milina sary hoso-doko ho an'ny masinina an-tsaina
Milina ara-pahitana ara-pahitana momba ny motera ho an'ny rakotra motera
Masinina Visual Enamel Masinina | Fampiroboroboana Souvenir
Milina marim-pototra sary hoso-doko
Milina Crystal Doming Milina
Mosaic Doming Sticker mandeha ho azy
Epoxy Sticker | Masinina Label Doming
Akanjo mihantona milina fampirimana
Milina Epoxy Doming Milina ho an'ny bokotra
Hamafa ny fanodinana epoxy Coating Keychain | vola madinika
Manomboka amin'ny WElDO ny fanamboarana Smart
Mpitondra amin'ny fanovana ny teknolojia milina fahitana manan-tsaina
Nandritra ny am-polony taona maro niainan'ny indostria manankarena, WELDO dia mifantoka amin'ny milina mpaninjara mandeha ho azy sy milina fandokoana. Nandalo ny fanamarinana rafitra kalitao ISO9001 izy ary manana patanty fananana tsy miankina tsy miankina sy zon'ny mpamorona lozisialy marobe. Ny orinasanay dia nandalo ny fanamarinana orinasa roa-malefaka, ny haavon'ny haitao ankehitriny sy ny haben'ny varotra dia nahatratra ny haavon'ny indostria manerantany.
Masinina hafainganam-pandeha avo lenta finday avo lenta
Application: 1. mety amin'ny karazan-javatra ranon-javatra isan-karazany, toy ny loko mofomamy, lakaoly epoxy resy AB, enamel, lakaoly UV, silôtika elektronika, lakaoly kristaly, ranomainty plastika, ranomainty vy, lakaoly EMI conducteur, cohesive conductive, lakaoly eo noho eo, lakaoly manary, paty apetaka, menaka manitra, lakaoly volafotsy, lakaoly mena, paty mafana, paty fisorohana hain-tany, loko mangarahara, mpandraharaha fanamboarana visy, resina pu, lakaoly viscosity ambany / afovoany, sns 2. azo ampiharina handrotsahana fitaovana ara-tsiranoka amin'ny workpiece samihafa, toy ny vy, plastika, kitay, sticker ary sns.
Weldo miloko 5 miloko PVC / Silicon milina dispenser automatique
endri-javatra 1.Afidio ny rakitra JPG amin'ny rindrambaiko handefasana fandaharam-potoana. 2. Amin'ny fampiasana programa solosaina, hita mazava ny rindrambaiko, mety sy haingana. 3.Ny nozel tokana na ny baomba marobe dia azo ampiasaina araka ny famokarana tena izy. Nozzles Max 5 miara-miasa hanatsara ny famokarana. 4.Hatramin'ny bokotra hitsin-dàlana 8 differnt, mety amin'ny famokarana fomba maro. 5.Araka ny fandaharana voapetraka dia afaka voatahiry ao anaty solosaina ary manan-kery maharitra. Rehefa mila atao amin'ny manaraka ny vokatra dia azo antsoina mivantana ilay programa raha tsy misy fandaharana faharoa. 6.Dispensing bobongolo roa miaraka amin'ny fiasan'ny toerana bobongolo. 7.Suit vokatra sarotra sy be sandan'ny nanampy PVC sy silisy. 8. Famokarana haingana, ny masinina iray dia mitovy amin'ny mpiasa 3 ka hatramin'ny 5 tsirairay, izay afaka hanafohezana ny fe-potoana fandefasana baiko. 9.Miorina tsara amin'ny vokatra PVC / silicone, avo lenta, tahan'ny tsy fahampiana ambany, afaka manampy amin'ny fampihenana ny vidiny. 10.Fampianarana rindrambaiko sy fikirakirana milina dia mora ianarana, afaka manampy hanafohezana ny fotoana fampiofanana. 11.Fomba fanaovana fandaharana: teboka, tsipika, tsipika.
Weldo 12 miloko PVC / Silicon milina dispenser mandeha ho azy
endri-javatra 1.Afidio rakitra JPG na DXF amin'ny rindrambaiko handrindrana ny làlan'ny programa. Fomba fanodinana 2.Flexible, afaka arak'ireo mpanjifa te hisafidy ny fandaharana sary amin'ny solosaina na hampianatra fandaharana boaty (mora ampiasaina). 3.Ny nozel tokana na ny baomba marobe dia azo ampiasaina araka ny famokarana tena izy. Max12 nozzles miasa miaraka hanatsara ny famokarana. 4.Hatramin'ny bokotra hitsin-dàlana 8 differnt, mety amin'ny famokarana fomba maro. 5.Araka ny fandaharana voapetraka dia afaka voatahiry ao anaty solosaina ary manan-kery maharitra. Rehefa mila atao amin'ny manaraka ny vokatra dia azo antsoina mivantana ilay programa raha tsy misy fandaharana faharoa. 6.Dispensing bobongolo roa miaraka amin'ny fiasan'ny toerana bobongolo. 7.Suit vokatra sarotra sy be sandan'ny nanampy PVC sy silisy. 8. Famokarana haingana, ny masinina iray dia mitovy amin'ny mpiasa 3 ka hatramin'ny 5 tsirairay, izay afaka hanafohezana ny fe-potoana fandefasana baiko. 9.Miorina tsara amin'ny vokatra PVC / silicone, avo lenta, tahan'ny tsy fahampiana ambany, afaka manampy amin'ny fampihenana ny vidiny. 10. Afaka ampiarahina amin'ilay robot mba hamoronana tsipika famokarana mandeha ho azy tanteraka, izay afaka mamokatra sy mampihena ny vidin'ny asa. 11.Fianarana mora foana ny fikirakirana rindrambaiko sy ny milina, afaka manampy hanafohezana ny fotoana fampiofanana. 12.Fomba fanaovana fandaharana: teboka, tsipika, tsipika.
Weldo 18 miloko PVC / Silicon milina dispenser mandeha ho azy
Fampiharana vokatra: Vokatra 1.Gift 2.Keychain, bar mat, cup coaster, tagan'ny valizy, tranga mpamily pen, 3.Silôna finday cae, famantaranandro silika, fehin-tànana silipo, mpihazona finday PVC, mpanokatra tavoahangy PVC. 4.zipper puller, rubber badge, kiraro ambony, hook and loop loop 5.Shoes overlay, TPR anticollision strip ho an'ny fonon-tànana, kiraro irery
Teknolojia famokarana mandeha ho azy tanteraka, fanafahana ny asa, fitsitsiana asa ary fanatsarana ny fahombiazany!
WELDO dia manome fitaovana famoahana lakaoly avo lenta, vahaolana fampiharana haitao vaovao sy natao manokana hanampiana ny mpanjifa hampitombo ny fahaizan'ny orinasa, hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana ary hahatratra tanjona maharitra, hahatonga ny milina sy ny fitaovana mandeha ho azy hampitombo ny fahombiazan'ny famokarana sy ny fitoniana eo amin'ny vokatra, hanova ny vidin'ny famokarana ary hampitombo ny tombony.
Ny fitaovana automatique WELDO dia manolotra karazana milina fanaparitahana sy robot scara ho an'ny mpanjifa manerantany, ny vokatra dia be mpampiasa amin'ny fitaovana elektronika, fiara, kojakojan-trano, kojakoja kiraro, sticker, moto, plastika mitete, marika famantarana, fanomezana firavaka, famantaranandro, sakafo, golf, zavakanto, kojakoja finday, solomaso ary saha hafa. Ireo mpanjifa fiaraha-miasa maharitra dia misy ny Midea, Huawei, Gree, Skyworth, Haier, ary ireo orinasa Fortune 500 hafa ary orinasa marobe manamboatra orinasa kely sy salantsalany.
Famokarana famokarana masinina haingam-pandeha
Famaritana famokarana masinina haingam-pandeha
Masinina haingam-pandeha ho an'ny vokatra arc mamiratra avo
Masinina haingam-pandeha ho an'ny vokatra arc mamiratra be
WEIDO Lokoy ny marika fiara misy ny masinina haingam-pandeha
WEIDO Lokoy ny marika fiara misy milina haingam-pandeha
Niorina tamin'ny volana martsa 2007 ny WELDO.
WELDO dia orinasa teknolojia mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fivarotana fitaovana fanamboarana mandeha ho azy ho an'ny fifehezana tsiranoka, toy ny fanomezana lakaoly mandeha ho azy, fizarana plastika, fandokoana ary valves tsindrona. Ny sokajy lehibe misy anay dia ny milina mpaninjara sy robot scara, sns.
Omeo ny teknolojia famokarana manan-tsaina eo amin'ny indostria, matihanina, lavorary, mialoha-varotra, varotra, serivisy aorian'ny varotra, vahaolana fampiharana teknolojia namboarina manokana, famokarana automatique visual advanced.
Mifandraisa aminay mba hahitana vahaolana orinasa bebe kokoa
Ny famolavolana sy ny fikarohana ary ny famolavolana vahaolana miafina izay manome lanja ny orinasa ho an'ny orinasa mifanaraka amin'ny filan'izy ireo.